मौसम परिवर्तन को अस्तित्व को प्रमाण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज र मौसम परिवर्तन मा अवस्थित प्रमाण संग, त्यहाँ अझै व्यक्तिहरू छन् जसले यसलाई इन्कार गर्छन्। मानिस जसले मौसम परिवर्तन अवस्थित छ भनेर विश्वास गर्दैनन्। कुनै थप कुरा नगरी हामीसँग संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प छन् जसले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको अस्तित्वलाई इन्कार गर्छन्। उनी भन्छन कि यो प्रतिस्पर्धा हासिल गर्न चिनियाँहरुको आविष्कार हो।
यो सामान्य हो, कि विश्वको केहि क्षेत्रहरूमा यो बहसमा प्रवेश गर्न सक्दछ। मौसम परिवर्तन अनुसार, हाम्रो ग्रह तापक्रम छ। यद्यपि यस ग्रहका धेरै क्षेत्रमा चिसो जाडोको अनुभव भइरहेको छ, कम तापक्रमको रेकर्ड तोड्दै। यदि यो त्यस्तै हो भने के मौसम परिवर्तन वास्तवमै अवस्थित छ? हामी किन यसको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नमा गलत छौं?
1 प्रमाण जसले यो बनाउँछ कि जलवायु परिवर्तन अवस्थित छैन
2 सही मौसम परिवर्तनको प्रमाण
प्रमाण जसले यो बनाउँछ कि जलवायु परिवर्तन अवस्थित छैन
वैज्ञानिक समुदायको%%% ले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको अस्तित्व पुष्टि गर्दछ। यसका लागि ग्रहको केही खास क्षेत्रहरूमा चिसो तापक्रम अवलोकन गरिएको छ, यद्यपि यस प्रमाणलाई प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न केही गलत कुरा हो जुन सम्पूर्ण विश्वलाई असर गर्दछ।
को घटना एल नीनो यो यी सबै जलवायु घटनाहरूको मुख्य पात्र हो जसले सम्पूर्ण विश्वलाई भ्रमित गर्न सक्दछ। अधिक वा कम, यो चार बर्षको चक्रमा काम गर्दछ र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी तटको क्षेत्रमा पत्ता लगाइन्छ। समुद्री प्रवाहको तातो तापक्रमले विश्वभरिका व्यापार वायुहरूलाई असर गर्दछ र त्यसैले युरोप जस्ता क्षेत्रमा लामो शीत तूफानहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ। यो स्पष्टीकरण हो किन हामी हिउँदहरू यती चिसो फेला पारेका छौं, किनभने जलवायु परिवर्तन अवस्थित छैन।
त्यहाँ अन्य प्रमाणहरू पनि छन् जसले मौसम परिवर्तनलाई नकार्न सक्छ। यो बारेमा छ अन्टार्कटिकाले हालका वर्षहरूमा अनुभव गरेको हिउँको वृद्धिको बारेमा। यो आर्कटिकमा के भइरहेको छ त्यसको विपरित हो, जसमा कम र कम हिउँ छ। यसको लागि व्याख्या यो छ कि अन्टार्कटिका यसको स्थितिको कारणले गर्दा, यसलाई मजबूत रूपमा हावा र समुद्री धारले घेरिएको छ। यस प्रकारले यो मौसमको बाह्य प्रभावबाट बढी आश्रयित छ।
सही मौसम परिवर्तनको प्रमाण
यद्यपि यी विगतका प्रमाणहरूले हामीलाई विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको अस्तित्वको बारेमा शंका उत्पन्न गर्न सक्दछ, यद्यपि वास्तविकता फरक छ। सन् १ 1880० मा व्यवस्थित मापन शुरु भएदेखि भर्खरका वर्षहरूमा, ग्रह पृथ्वीले तापमानमा विसंगत बृद्धि भएको छ।
२०१ 2016 रेकर्डमा सबैभन्दा तल्लो वर्ष हो, २०१ was र २०१ respectively क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। उसको अनुसार मौसम परिवर्तनको लागि अन्तर सरकारी प्यानल (आईपीसीसी, अंग्रेजीमा यसको संक्षिप्त रूपमा), औसत विश्वव्यापी तापमान १ 0,85० देखि २०१२ सम्म ०.1880 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ।
त्यसोभए, यस ग्रहको केहि क्षेत्रहरूमा चिसो मंत्रको बाबजुद पनि, हामी केवल त्यसमा ध्यान दिन सक्दैनौं। हामीले सम्पूर्ण ग्रहको तापक्रमको कुल प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसले पृथ्वीको इतिहासभरिमा मौसम परिवर्तनहरू अध्ययन गरेका छन् र उनीहरूले यस तथ्यलाई वर्तमान जलवायु परिवर्तनको बारेमा चिन्ता गर्छन् यो एक प्राकृतिक उतार चढाव बाहेक अरु केहि छैन र मानव मानिस यस मा हस्तक्षेप गरेको छैन।
यो सत्य हो कि ईतिहासको इतिहासमा पृथ्वीको मौसम परिवर्तन भएको छ, तर के कुराले मानिसलाई यो कारण गराउँछ कि मानव यसको कारण हो, यो गति छ जुनसँग यो मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो हो, पृथ्वीको इतिहास भर वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाहरु को माध्यम बाट भएको छ जुन हुन लाखौं वर्ष लाग्यो। यद्यपि वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग १ 150० बर्षको भैरहेको छ। यो मुख्यतया हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरुबाट ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनको कारणले हो र यसको प्रमाण बहुविध अध्ययन र ज्ञान जुन हामीसँग यी ग्याँसहरूको विशेषताहरु बारे छ।
मौसम परिवर्तनको अझै प्रमाणहरू छन् जुन हामी अर्को पोस्टमा हेर्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनको अस्तित्व को प्रमाण